I-Retro Classic Loft - I-Airbnb
I-Retro Classic Loft
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-John
I-Retro Classic Loft iyindlu yokulala eyodwa/yokugeza eyodwa etholakala edolobheni lase-Ely. Le yunithi yesitezi sesibili ilungiswe kabusha futhi yahlotshiswa ngobuciko obujabulisayo bamaphakathi nekhulunyaka. Indawo, (ibhlokhi elilodwa elifushane ukusuka ku-Ely's Main Street), ilungele ukuyothenga, ukudla, ukuzijabulisa njll.
Nakuba leli fulethi elikhanyayo lilincanyana ngobude, (u-500 sqft nje), likhulu ngobuntu! Ifaka zonke izinsiza zokuqinisekisa indawo ehlanzekile, enethezekile yokujabulela konke lokho u-Ely nendawo ezungezile okufanele akunikeze.
I-Retro Classic Loft "iyindawo yasemadolobheni" enhle yohambo lwakho lwasenyakatho.
Nakuba singahlali kule ndawo, sisekude. Sicela uzizwe ukhululekile ukusithinta ngaphambi, phakathi, noma ngemva kokuhlala kwakho nganoma yimiphi imibuzo mayelana nendawo yethu.